Eritrea inyika iri kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva mudunhu rinonzi Runyanga rweAfrica. Gutaguru renyika iyi rinonzi Asmara; iyo Eriteria yakaganhurana nenyika dzinoti: Sudan kumadokero; Ethiopia kuchamhembe; neDjibouti iri kumabvazuva. Matunhu ari kumabvazuva nekumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweEriteria ane miganhu wakatambarara uri paGungwa Dzvuku, kwakatarisana nenyika dzinoti Saudi Arabia neYemen. Nyika iyi ine nharaunda inoda yakakura kusvika skweya ekiromita 117,600 tichisanganisira Ruwarinako rweZvitsuwa zveHanish neRuwarikano rweZvitsuwa zveDahlak.
Nyika yeEritrea ine marudzi mazhinji evanhu, kune marudzi mapfumbamwe ane anozivikanwa ane makonzwa. Nyika iyi ine hugari hwevanhu mamirioni matanhatu. Vagari vemo vazhinji vanotaura misaku yemitauro yeAsia neAfrica iri mitauro yezvizvarwa zveMhuri dzaShem neMhuri dzaCush. Marudzi eVaTigrinya ane zvizvarwa zvinokwana kusvika 55% yehugari hwevanhu, ayawo marudzi eVaTigre achibata chikamu chinosvika 33% yevagari muEritrea. Kunoitawo marudzi ezvidza zveNile vane mitauro yenharaunda yeNile-Sahara. Vagari vazhnji veEritrea vanotecedza zvitendero zvechiKristu nechiIslam.
Retrieved from "https://sn.wikipedia.org/w/index.php?title=Eritrea&oldid=68985"
This page was last edited on 22 Gunyana 2019, at 04:16.